Iyini I-Digital Asset Management (DAM) Platform? | Martech Zone
Ukuphathwa kwempahla yedijithali (I-DAM) iqukethe imisebenzi yokuphatha nezinqumo ezithinta ukungeniswa, isichasiselo, ukwenza ikhathalogi, ukugcinwa, ukubuyisa, nokusatshalaliswa kwezimpahla zedijithali. Izithombe zedijithali, ukugqwayiza, amavidiyo, nomculo kuyisibonelo sezindawo okuhloswe ngazo ukuphathwa kwempahla yemidiya (isigaba esincane se-DAM).
Kuyini Ukuphathwa Kwempahla Yedijithali?
Ukuphathwa kwempahla yedijithali I-DAM kuwumkhuba wokuphatha, ukuhlela, nokusabalalisa amafayela emidiya. Isoftware ye-DAM inika amandla amabhrendi ukuthi akhe umtapo wezincwadi wezithombe, amavidiyo, ihluzo, ama-PDF, izifanekiso, nokunye okuqukethwe kwedijithali okuseshekayo futhi okulungele ukusetshenziswa.
Kunzima ukwenzela icala ukuphathwa kwempahla edijithali ngaphandle kokuvela ngokungayeki ukusho okusobala. Isibonelo: ukumaketha namuhla kuncike kakhulu kwimidiya yedijithali. Futhi isikhathi yimali. Ngakho-ke abathengisi kufanele basebenzise isikhathi sabo esiningi semidiya yedijithali ngangokunokwenzeka emisebenzini ekhiqiza kakhulu, enenzuzo nokuncane ekusweleni nasekugcinweni kwezindlu ngokungadingekile.
Siyazazi lezi zinto ngokunembile. Ngakho-ke kuyamangaza ukuthi, ngesikhathi esifushane ebengibambe ngaso iqhaza ekulandiseni indaba ye-DAM, ngibone ukwanda okuqhubekayo nokuphangisa kokuqwashisa kwezinhlangano nge-DAM. Lokho kusho ukuthi, kuze kube muva nje, lezi zinhlangano bezingazi ukuthi zilahlekile.
Phela, inkampani imvamisa iqala ukuthenga isoftware ye-DAM lapho ibona ukuthi, okokuqala, inokuningi (funda “ivolumu engalawuleki”) yezimpahla zedijithali nokuthi, okwesibili, ukubhekana nomtapo wezincwadi omkhulu wezimpahla zedijithali kuthatha kakhulu. isikhathi esiningi ngaphandle kokuletha inzuzo eyanele. Lokhu kube yiqiniso kuzo zonke izimboni eziningi ezihlanganisa imfundo ephakeme, ukukhangisa, ukukhiqiza, ukuzijabulisa, okungenzi inzuzo, ukunakekelwa kwezempilo, nobuchwepheshe bezokwelapha.
Uhlolojikelele Lwe-Widen's Digital Asset Management Platform
Yilapho i-DAM ingena khona. Izinhlelo ze-DAM zinobuningi nobukhulu obuningi, kepha zonke zakhelwe ukwenza okungenani izinto ezimbalwa: ukugcina phakathi, ukuhlela nokusabalalisa izimpahla zedijithali. Ngakho-ke yini okudingeka uyazi ukuqondisa usesho lwakho lomthengisi?
Amamodeli Wokulethwa kwe-DAM
Banzi muva nje ukhiphe iphepha elihle elimhlophe elichaza ngokuhlukana (kanye nokugqagqana) phakathi kwe-SaaS vs. Hosting vs. Hybrid vs. Open Source DAM izixazululo. Lesi isisetshenziswa esihle ongasihlola ukuthi uyaqala yini ukuhlola izinketho zakho ze-DAM.
Into ebaluleke kakhulu ukwazi, noma kunjalo, ukuthi ngalinye lalawa magama amathathu ayindlela yokuchaza i-DAM (noma enye isoftware, yalolo daba) ngokuya ngemigomo ehlukile. Azihlangani ngakunye — yize kungekho ukugqagqana phakathi kwe-SaaS nezixazululo ezifakiwe.
I-SaaS DAM amasistimu anikezela ukuguquguquka ngokuya kokuhamba komsebenzi nokufinyeleleka ngezindleko eziphansi ze-IT. Isoftware nempahla yakho isingathwa efwini (okungukuthi, amaseva akude). Ngenkathi umthengisi we-DAM owaziwayo ezosebenzisa indlela yokubamba evikeleke ngokweqile, ezinye izinhlangano zinezinqubomgomo ezibavimbela ekuvumeleni imininingwane ethile ebucayi ngaphandle kwezindawo zabo. Uma uyi-ejensi yezobunhloli kahulumeni, ngokwesibonelo, mhlawumbe awukwazi ukwenza i-SaaS DAM.
Izinhlelo ezifakiwe, ngakolunye uhlangothi, zonke "zisendlini." Umsebenzi wenhlangano yakho ungadinga uhlobo lokulawula kwimidiya engaqhamuka kuphela ekugcineni idatha namaseva akuwe esakhiweni sakho. Noma kunjalo, kufanele ulazi iqiniso lokuthi, ngaphandle kokuthi usekela idatha yakho kumaseva akude, lo mkhuba ukushiya uvulekele engcupheni umcimbi othile uzoshiya izimpahla zakho zingenakuphikwa ngokuphelele. Lokho kungaba yinkohlakalo yedatha, kepha futhi kungaba ukweba, izinhlekelele zemvelo noma izingozi.
Ekugcineni, kukhona umthombo ovulekile. Leli gama lisho ikhodi noma ukwakheka kwesoftware uqobo, kepha hhayi ukuthi ngabe isoftware itholakala ukude noma ngemishini yakho yangaphakathi endlini. Akufanele ungene ogibeni lokusekela isinqumo sakho ekutheni umthombo ovulekile ukufanele yini ukuthi ngabe isixazululo siphethwe noma sifakiwe. Futhi, kufanele uqaphele ukuthi ukuba ngumthombo ovulekile wesoftware kungeza inani kuphela uma wena noma omunye umuntu enezinsizakusebenza zokwenza ukungasebenzi kahle kohlelo.
Izici Zokuphathwa Kwempahla Yedijithali
Njengokungathi izinhlobonhlobo zamamodeli okulethwa azanele, kukhona nenhlobonhlobo yezici ezibekiwe laphaya. Abanye abathengisi be-DAM bangcono kunabanye ekuqinisekiseni ukuthi bakufanelekela kangcono ukuhlangabezana nezidingo zakho ezihlukile ngaphambi kokuzama ukukuthengisa kusistimu yabo, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ungene ekuzingeleni kwakho kwe-DAM nohlu olunemininingwane yezidingo ngangokunokwenzeka.
Enye yentuthuko ebalulekile kubuchwepheshe be-DAM amandla abo okuhlanganisa nazo zonke izinkundla ezinkulu zokuhlela nokushicilela - eziningi ezinokugeleza kwenqubo yokugunyaza okuphelele. Lokho kusho ukuthi umklami wakho angaklama umfanekiso, athole impendulo ethimbeni, enze ukuhlela, futhi asunduze isithombe esithuthukisiwe ngqo kusistimu yakho yokuphatha okuqukethwe.
Okungcono nakakhulu: hlukanisa izidingo zakho zibe izigaba okufanele ube nazo kanye nezokujabulisa ukuba nazo. Kufanele futhi uqaphele noma yiziphi izici ezidingekayo ngenxa yanoma yimiphi imithetho, imithetho, noma eminye imithetho elawula imakethe noma imboni yakho.
Okwenziwayo konke lokhu ukuqinisekisa ukuthi awugcini unezici ezimbalwa kangangokuthi awukwazi ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokugeleza komsebenzi wakho ngangokunokwenzeka noma izici eziningi ozithola ukhokhela izinsimbi namakhwela ongasoze wakudinga. noma ufuna ukusebenzisa.
Izinzuzo Zenkundla Yokuphathwa Kwempahla Yedijithali
Ukucabanga ngezinzuzo zokusebenzisa i- uhlelo lokuphathwa kwempahla edijithali Mayelana izindleko zokunciphisa or ukonga isikhathi akwanele. Akufiki enhliziyweni yokuthi i-DAM ingaba nomthelela kanjani enhlanganweni yakho nezinsiza.
Kunalokho, cabanga nge-DAM ngokwemibandela ye ukuphindisela. Sivame ukusebenzisa igama ukuze sibhekisele endleleni isofthiwe ye-DAM evumela ngayo futhi iqondise ukuphinda kwenziwe kabusha kwezimpahla zedijithali ngazinye, kodwa (uma zisetshenziswa kahle) ingaba nomthelela ofanayo kubasebenzi, kumadola, nakuthalente.
Thatha umklami. Njengamanje angase achithe angu-10 njalo emahoreni angu-40 ekusesheni impahla engasasebenzi, imisebenzi yokulawula inguqulo, nokugcinwa kwelabhulali yezithombe. Ukusetha i-DAM nokususa isidingo sakho konke lokho ngeke kusho ukuthi kufanele unciphise amahora omklami wakho. Okushoyo ukuthi amahora okusebenza okungasebenzi kahle, okungenanzuzo manje angasetshenziswa ukusebenzisa amandla okugabadela omklami: ukuklama. Okufanayo kuya kubathengisi bakho, ithimba lezentengiso, njll.
Ubuhle be-DAM abukona nje ukuthi buyashintsha isu lakho noma kwenza umsebenzi wakho ube ngcono. Kungenxa yokuthi kuyakukhulula ukuthi uphishekele isu elifanayo ngolaka futhi kwenze umsebenzi wakho ugxile kakhulu isikhathi esithe xaxa.
Ikesi Lebhizinisi Lokuphathwa Kwezimpahla Zedijithali
U-Widen ushicilele lo mfanekiso ojulile okuhambisa kuwo icala lebhizinisi lokutshala imali kuplathifomu Yokuphathwa Kwempahla Yedijithali.
Tags: ukwakhiwa kwempahlaukusatshalaliswa kwempahlaukuphathwa kwefaukulungiselelwa kwempahlaukuhlela kwempahlaukulondolozwa kwempahlaizinzuzo zedamuUkukhangisa OkuqukethweIdamuidamu infographicukuphathwa kwempahla edijithaliinkundla yokuphatha impahla yedijithaliimeyili Marketinginfographicukuphathwa kwempahla yemidiyayini idamuiyini inkundla yokuphatha impahla yedijithaliwandulanwebisa amafa
Ungakushicilela Kanjani Okuphakelayo Kwakho Kwebhulogi YakwaShopify Esifanekisweni Sakho Se-imeyili Se-Klaviyo